Politika Amerikana? Tsia, Misaotra. Voatabia Omena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2016 4:28 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, عربي, Español, Français, русский, srpski, English
Sary mampiseho tanana sy bileta avy amin'ny Pixabay. Sariitatr'i Clinton sy Trump nataon'i DonkeyHotey (CC BY-SA 2.0). Sary nafangaron'i Georgia Popplewell.
Tamin'ny fahazazana aho tsy tia voatabia. Tsy azoko ny antony hitiavan'olona azy ireny. Namboly ilay voankazo mena tao an-jaridaina ny renibeko, ka isaky ny fahavaratra, kivy am-pahanginana aho satria mipoitra hatrany eo ambonin'ny latabatra fihinanana ilay voatabia tsy nohandroana. Nahatonga ny oroko ho kentrina ny tsirony mamy somary masaotsao, ary malemilemy mitsiranoka nampahatsiahy ahy taovan'ny fon'olombelona, na farafahakeliny izany no hakako sary an-tsaina momba azy ireny.
Amin'ny maha olon-dehibe, monina ao amin'ny tanin'i gazpacho, La Tomatina sy pa amb tomàquet aho, ary niha-nitia ny tsiro mamy kanefa masaotsao sady malemilemy mitsiranoka aza.
Ny tena mifanohitra amin'izany no nitranga tamiko teo amin'ny politika Amerikana. Tamin'ny fahazazana aho zatra nihinana politika. Nandany ny ankamaroan'ny vanim-potoana mafana tany amin'ny ray aman-drenibeko tao Afovoany Andrefana Amerikana aho, ny fitsipika ao an-trano amin'izany dia mitaky aminao hilalaovana any ivelany amin'ny atoandro. Raha te ho ao anatiny ianao, dia tsara kokoa raha amin'ny famakiam-boky izany. Ny famandrihan'ny raibeko sy ny renibeko Newsweek sy Time dia midika fa maro amin'ireo gazetiboky mivoaka isan-kerinandro ireo no nivangogo tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny, ka rehefa reraka nikodiadia teny amin'ny bozaka manodidina aho, na namadibadika ireo nindramiko farany tany amin'ny tranomboky, dia mandray ny iray amin'ireny, mikaroka pejy mitsilailay ambony “davenport,” ary mamaky feno ireo fivadibadihan'ny tantara politikan'ny taompolo 1990s. Voafetran'ny taonako anatin'ny fahatsorana ny fahatakarako tamin'izany—fa inona daholo ity resaka akanjo manga an'i Monica Lewinsky ity?—saingy tsy nanintona ahy mihitsy ny hevi-petsin'ireo matanjaka ao amin'ny firenena.
Nitondra izany fahalianako izany nankany amin'ny fahamatorana aho, ary nihalehibe izany rehefa nitombo ny fiotazako azy. Tamin'ny fotoana nitosatosahan'ny aterineto tao amin'ny indostirian'ny fampitam-baovao miaraka amin'ny hafainganam-pandehany miramarama aoka izany, dia nankamamiako ny fahadaladalana manaraka tati-baovao ara-politika mandritra ny 24 ora, sy niasa ho solontenam-paritra ao amin'ny efi-panoratana manana ny lazany mahatonga ny ankamaroany ho tsy mety afa-po ara-virtoaly. Nisy fotoana aza efa nanofinofisako ho mpanangom-baovao ara-politika, mihaza ireo mpanao lalàna eny amin'ny lalantsaran'ny fahefana ho afaka ho velona.
Ankehitriny, sambany teo amin'ny fiainako, hitako ho tsy manana hanoanana amin'ny politika amerikana aho. Izay noheveriko ho tantara tsangana manam-pahamendrehana no hitako ho tahaka ny kisangisangy mampatahotra kokoa. Tsy matoky loatra aho amin'izay nahatonga ny faharavan'ny fanovamaso tamiko. Lasa mampisara-tsaina kokoa ve ny politikan'i Etazonia? Angamba. Very ve ny fomba fijeriko lafin-javatra tsara rehefa miha-antitra aho? Angamba. Ny fifindrako nankany Espaina ve no nanova ny fomba fijeriko? Mety ho izay.
Na inona na inona antony, ny fifidianana ho filoham-pirenena tao Etazonia fotsiny dia tahaka ny efa mahatonga ny tsy fahazakako ho ratsiratsy kokoa. Fantatro fa maro ny Amerikana ao an-tanindrazana sy any ivelany no manana fahatsapana tahaka izany ihany koa. Tsy mitelina vaovao politika tahaka ny mahazatra ahy aho. Mangarika ireo teny malazan'ny andro aho. Tsy mahavita mitondra ny tenako na dia hijery ny kabarim-paneken'i Hillary Clinton ao amin'ny Fihaonam-Pirenen'ny Demokraty akory aza aho—dia ilay fotoana manan-tantara anoloran'ny antoko lehibe kandidà filoham-pirenena vehivavy voalohany eo amin'ny firenena, tsy ijerena izay fahatsapanao momba azy. Toy izany ihany koa, amin'ity raharaha ity, ny tsy fahavitako mijery ny an'i Trump, izay tafiditra ho tantara noho ny antony hafa tanteraka ny firotsahany koa kandidà.
Na dia te-hihoaka aza, dia mihevitra aho fa manana adidy amin'ny maha-olompirenena hahara-baovao, ka dia tsy fidiny ho ahy ny manaraka ny raharaha ara-politika amerikana. Ary tsy mora koa ny mandositra azy. Tahaka ny ampahatelon'ny mponina eto amin'izao tontolo izao, dia mampiasa ny media sosialy aho. Na dia mandao ny Facebook sy Twitter ary Reddit aza aho, ny ampahany amin'ny vaovao fanarako dia avy amin'ny loharanom-baovaon'ny fampitam-baovao lehibe ao Etazonia, na dia be aza ny lesoka ao aminy. Ary na dia tsy manaraka ny vaovao ao an-toerana ao Etazonia aza aho, dia mahatonga azy ho tsy mety azo sorohina ny tsy fialan'ny lohatenim-baovao pejy voalohany espaniola amin'ny Fotoan-Dehiben'i Etazonia.
Tsy lazaina ny maha-toniam-baovaon'i Global Voices ahy, ka tokony ipetrahan'ny rantsa-tanako mihaino ny fitempon'ny fon'ny politika amerikana, raha te-hanao tsaratsara kokoa ny asako aho.
Koa dia mihevitra aho fa hanao izay tsara indrindra azoko atao hahamora hohanina ny adihevitra ary hiezaka ny hitazona ny sarom-bilany eo amin'ny Weltschmerz-ko [fahatsapana ny fahorian'izao tontolo izao=ny zavamisy azo tsapain-tanana tsy ho afaka na oviana na oviana hameno ny tinadin'ny saina]— eny fa na dia maha-te-hitoraka voatabia ny mpiantsehatra aza ny tantara tsangana politika eo amin'ny sehatra Amerikanina. Farafaharatsiny aloha mba tia voatabia aho ankehitriny.
Mampihomehy tahaka ny ahoana ny mety ho fiovan'ny tsiro.